မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ခေါငျးတလားအလုံး(၁၅၀)လုံးကို လူမှုဂရုဏာအသငျးမှတဈဆငျ့ ပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့ကွတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံက အလှူရှငျမြား – Shwe Thadin
12/06/2021 T Z News 0
ထိုငျးအလှူရှငျတှကေ အခေါငျးတှလှေူဒါနျးလိုကျတာကွောငျ့ နိမိတျကွိုဖတျတဲ့သဘောလားဆိုပွီး ပွညျသူတှကေ သို့လောသို့လောတှထေငျမှတျနကွေကာ အခုလိုလူစိတျဝငျစားနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အမှနျတကယျတော့ ထိုငျးနိုငျငံက အလှူရှငျတှဟော
မွနျမာနိုငျငံဘကျကို နှဈစဉျနှဈတိုငျးခေါငျးတလားတှလှေူဒါနျးနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ထနျးသီး ကွှေ ခို ကျ ကြီးနား ခို ကျဆိုသလို ယခုလိုအခြိနျအခါနဲ့ အခေါငျးလှူဒါနျးလိုကျတဲ့သတငျးဟာ တို ကျဆိုငျသှားခဲ့တာကွောငျ့ အခုလိုအထငျအမွငျလှဲမှားသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။….
ထိုငျးနိုငျငံဘကျက အလှူရှငျတှကေတော့ အဆိုပါခေါငျးတလားအလုံး(၁၅၀)လုံးကို လူမှုဂရုဏာအသငျးမှာတဈ ဆငျ့ ပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။လူမှုဂရုဏာအသငျးက အဆိုပါခေါငျးတလားတှကေို တာခြီလိတျမွို့၊ ကှမျရငျ တရုတျဘုံကြောငျးသို့ပေးပို့ပေးခဲ့ပွီး….
အဆိုမှတဈဆငျ့ တာခြီလိတျ ၊တာလေ ၊မို ငျး ဖွ တျမှ လူမှုကူညီရေးအသငျးတှထေံ ပေးပို့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ လူမှုဂရုဏာအသငျးကတော့ ထိုငျးနိုငျငံမယျဆိုငျဘကျမှ မွနျမာနိုငျငံ တာခြီလိတျဘကျသို့ပို့ဆောငျရာတှငျ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လှယျဝေါငျး(ဦးအောငျဇယြေ) ကြောငျးထိုငျ ဆရာတျောနဲ့ အခေါ ငျးလှူဒါနျးလိုကျတဲ့ အလှူရှငျတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါကွောငျး ထုတျပွနျထားခဲ့ပါတယျ။…
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ခေါင်းတလားအလုံး(၁၅၀)လုံးကို လူမှုဂရုဏာအသင်းမှတစ်ဆင့် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အလှူရှင်များ
ထိုင်းအလှူရှင်တွေက အခေါင်းတွေလှူဒါန်းလိုက်တာကြောင့် နိမိတ်ကြိုဖတ်တဲ့သဘောလားဆိုပြီး ပြည်သူတွေက သို့လောသို့လောတွေထင်မှတ်နေကြကာ အခုလိုလူစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံက အလှူရှင်တွေဟာ
မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခေါင်းတလားတွေလှူဒါန်းနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်းသီး ကြွေ ခို က် ကျီးနား ခို က်ဆိုသလို ယခုလိုအချိန်အခါနဲ့ အခေါင်းလှူဒါန်းလိုက်တဲ့သတင်းဟာ တို က်ဆိုင်သွားခဲ့တာကြောင့် အခုလိုအထင်အမြင်လွဲမှားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။….
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က အလှူရှင်တွေကတော့ အဆိုပါခေါင်းတလားအလုံး(၁၅၀)လုံးကို လူမှုဂရုဏာအသင်းမှာတစ် ဆင့် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဂရုဏာအသင်းက အဆိုပါခေါင်းတလားတွေကို တာချီလိတ်မြို့၊ ကွမ်ရင် တရုတ်ဘုံကျောင်းသို့ပေးပို့ပေးခဲ့ပြီး….
အဆိုမှတစ်ဆင့် တာချီလိတ် ၊တာလေ ၊မို င်း ဖြ တ်မှ လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေထံ ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဂရုဏာအသင်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုင်ဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်ဘက်သို့ပို့ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လွယ်ဝေါင်း(ဦးအောင်ဇေယျ) ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်နဲ့ အခေါ င်းလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အလှူရှင်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။…